ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကြိုးမဲ့စနစ်များသည် WFX ၂၀၁၄ တွင် ၀ တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနေရာများအတွက် RF ဖြေရှင်းနည်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြသည် NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ WFX 2014 မှာကိုးကွယ်မှုအဖွဲ့၏အိမ်အဘို့အ RF Solutions ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Range
Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ WFX 2014 မှာကိုးကွယ်မှုအဖွဲ့၏အိမ်အဘို့အ RF Solutions ၏မီးမောင်းထိုးပြထားသည် Range
Dallas, TX, စကျတငျဘာ 30, 2014 - Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ (PWS)တစ် Masque အသံကုမ္ပဏီနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်ထုတ်လွှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ကြိုးမဲ့စနစ်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့အတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ၎င်း၏ Helical antenna များနှင့်အမိုးခုံး Helical antenna, Intermodulation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆော့ဝဲစနစ် (ို့နှငျ့ဆကျ) အပါအဝင် WFX 2014 (Booth 1023) မှာ RF ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏အကွာအဝေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ် , ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် Multicouplers ၏ DB စီးရီး၏ကုမ္ပဏီမှ GX စီးရီး။
"ကျနော်တို့က WFX 2014 တက်ရောက်သူကိုးကှယျမှုပညာရှင်များ၏အိမျတျောမှ State-Of-The-Art RF နှင့်ကြိုးမဲ့ကိရိယာများကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုရောက်စေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်" ဟုဂျင်မ်ဗန် Winkle, အထွေထွေမန်နေဂျာ, PWS ကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ RF ဖြေရှင်းချက်ပြအပြင်, PWS ကိုယ်စားလှယ်များအထူးသဖြင့်လာမည့်အဘို့အပိုကြီးတဲ့စကေးဖြစ်ရပ်များ၏ရောက်လာအတူမည်သည့်အရွယ်အစားပုံဖြစ်ရပ်များမှာကြိုးမဲ့စနစ်များများအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထောက်ခံမှု install On-site များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဆှေးနှေးဖို့ On-လက်ဖြစ်လိမ့်မည် အားလပ်ရက်ရာသီ။ "
PWS '' စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်လိုင်းများနှစ်ယောက် Helical antenna နှင့် အမိုးခုံး Helical antennaအဆိုပါပြပွဲမှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည်။ PWS Helical antenna, ရှည်လျားသောအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောပစ်နှင့်မြင့်မားသောအမြတ်အသုံးပြုသူများအစွန်းရောက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပူဇော်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်, In-နားကိုများနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များ, Multichannel ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းစံဖြစ်လာကြပါပြီ။ အဆိုပါ circularly သဘောကွဲလွဲလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အင်တာနာ MHz 450 နှင့်အမိုးခုံး Helical များအတွက် 950dbi အမြတ်နှင့် 14dbi ကမ်းလှမ်းရန် 8.5 MHz တစ်ကြိမ်နှုန်းအကွာအဝေးကိုဖုံးလွှမ်း။ တစ်ခုအမြတ်အတွက်မွေးရာပါတိုးတက်မှု, သာ. ကြီးမြတ် bandwidth ကိုများနှင့်ကျောင်းထွက်ယဉ် polarization ကိုအတူ, PWS Helical antenna ရိုးရာအင်တင်နာဒီဇိုင်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို outshine ။ IEM စနစ်များနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်လူကြိုက်များအသုံးပြုသူများကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အင်တာကွမ်းဆက်ဆံရေးစနစ်များအပါအဝင်အခြားလှိုင်းနှုန်းသည် UHF စနစ်များ, ဤအင်တင်နာ employ နိုင်ပါတယ်။
နေရာများနှင့် site-line ကိုအသှငျအပွငျဦးစားပေး, PWS သောတပ်ဆင်မှုအတွက် အမိုးခုံး Helical antenna သေးငယ်အဆင့်ဆင့်နှင့်အလတ်စားအမြတ်အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောလွှမ်းခြုံတဲ့ကျယ်ပြန့်ထောင့်ကိုဆက်ကပ်။ မူရင်း PWS Helical အင်တင်နာအဖြစ်အတူတူမြို့ပတ်ရထား polarization ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, အမိုးခုံး Helical တစ်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပရိုဖိုင်းနဲ့ပိုမိုတာရှည်ခံ, sealable ဝင်းပါရှိပါတယ်။ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မဖြစ်အောင်နှင့်ကြံ့ခိုင်ခြင်း, PWS မိုးခုံး Helical အင်တင်နာဗေဒနှင့် function ကိုခိုးယူမရနိုင်တဲ့အခါအကြီးအရှေးခယျြမှုဖြစ်ပါတယ်။
PWS လည်းအသုံးပြုမှုအတွက်ဒေသခံရုပ်မြင်သံကြားလှိုင်းမှကြိုးမဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် Access တစ်ဒေတာဘေ့စပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့် setup ကိုအချိန်ပေါ်ကဆင်းလျှော့ချထားတဲ့သူ့ရဲ့ Intermodulation ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဆော့ဝဲ (ို့နှငျ့ဆကျ), သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ "PWS '' တို့နှငျ့ဆ software ကို RF ပညာရှင်များအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြဖြေရှင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်" ဟုဗန် Winkle ကထပ်ပြောသည်။ "ဒီရိုးရာရုံးတင်စစ်ဆေး-and အမှားနည်းလမ်းများကျော်ကြီးမားတဲ့အချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။ စင်ကြယ်သောကြိမ်နှုန်းို့နှငျ့ဆကျတှငျတှေ့ရှိရ၏ပြီးတာနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ Pre-ပြပွဲပစ္စည်းကိရိယာများစမ်းသပ်ဆော့ဖ်ဝဲရဲ့အော့ဖ်လိုင်း '' ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတည်ပြုရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲတခုငွီးငှေ့ဖှယျနှင့်အမှား-ကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကူညီပေးသည်။ "
ထို့အပြင် PWS ယင်း၏မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ် ကုမ္ပဏီမှ GX စီးရီး ပေါင်းစပ်ခြင်း, ၏ ကုမ္ပဏီမှ GX-4 နှင့် ကုမ္ပဏီမှ GX-8အဖြစ် output ကိုအပေါ်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအမြတ်အထက်, selection မြင့်အနိမ့်အထွက် setting များကိုပူဇော်အဖြစ်က၎င်း၏အရာ Multicouplers ၏ DB စီးရီးယင်းအပါအဝင် DB8 (8 လက်ငင်း), DB16 (16 လက်ငင်း) နှင့် DB24 (24 လက်ငင်း) ။ ဤရွေ့ကားမတူကွဲပြားမှုစနစ်များကိုအရှုံးမရှိဘဲနှင့်ဆိပ်ကမ်းများအကြားမြင့်မားတဲ့အထီးကျန်မှုတွေနဲ့အတူမျိုးစုံအသံဖမ်းရန်အင်တင်နာအချက်ပြမှုများကိုဖြန့်ဝေဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။
စိတ်ဝင်စားပြပွဲတက်ရောက်လာသူများကိုကုမ္ပဏီရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်ဟာယပူဇော်သက္ကာအကြောင်းကိုအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန် PWS '' WFX Booth (1023) ကရပ်တန့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့သည်ကိုလည်းကိုးကွယ်အံ့သောဖြစ်ရပ်များ၏အိမ်သူအိမ်သားစဉ်အတွင်း၎င်းတို့၏ကြိမ်နှုန်းညှိနှိုင်းပိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူစိတ်ဝင်စားနေသောတက်ရောက်ပြသရန်တစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းမှာ site ကိုစစ်တမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့လိမ့်မည်။
ဘရော့ဒ်ဝေး stagehands တစ်သုံးခြင်းဖြင့် 1936 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, Masque အသံက NYC ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးရုပ်ရှင်အသံကအားဖြည့်ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်းအတွက်အထူးပြုတပ်ဆင်ခနှင့်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများ, ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကိုအားကစား, ကော်ပိုရိတ်, တီဗီထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုသို့တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် 75 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုဂုဏ်ပြုသော, ကုမ္ပဏီ Geoff တွေညှပ်, ကုမ္ပဏီရဲ့ 3rd မျိုးဆက်ပိုင်ရှင်နှင့်ဒုတိယသမ္မတများနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ Stephanie Hansen အားဖြင့်ဦးတည်သွားစေသည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းဖလော်ရီဒါအခြေစိုက် Professional ကကြိုးမဲ့စနစ်များ, ကြိုးမဲ့နည်းပညာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ခရက်ဒစ်က "အော်ပရာ၏ Phantom", "MAMMA MIA !," "ခြင်္သေ့မင်းကြီးသည်", "ဂျာစီ Boys", "နောဖပြည်၌", "Mormonism ၏စာအုပ်", "Newsies", "ပြီးတာနဲ့" အပါအဝင်အဓိကဘရော့ဒ်ဝေးပွဲများနှင့်ခရီးစဉ်ကနေအထိ နှင့် "Kinky ဖိနပ်" နှစ်စဉ် Super Bowl ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်နယူးယောက်မြို့ရဲ့နယူးအောင်ပွဲခံပြဇာတ်ရုံနှင့်သမိုင်းဝင်စိန့်ဗာသောလမဲရဲ့ဘုရားကျောင်းအပါအဝင်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုး၏တပ်ဆင်ရန်။ Masque အသံရဲ့ 70,000 စတုရန်းမိုင်။ ပေ။ ကော်ပိုရိတ်ဌာနချုပ်နှင့်အဓိကစည်းဝေးပွဲကိုစက်ရုံ midtown မန်ဟက်တန်ကနေ 21 မိနစ် 20 အရှေ့ပြည်ထောင်စုရိပ်သာ, အရှေ့ရပ်သဖော့ဒ, NJ မှာတည်ရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခေါ်ဆိုမှု (201) 939-8666 သို့မဟုတ်ခရီးစဉ် www.MasqueSound.com.
ယခင်: ဖောက်ပြန်သောသူငယ် Animation ရဲ့ Wienerschnitzel များအတွက် Animated ကင်ပိန်းအတွက် Retro သွား
နောက်တစ်ခု: Artel ဗီဒီယိုစနစ်များ SMPTE 2014 မှာ DigiLink မီဒီယာပို့ဆောင်ရေးစှမျးခင်းကျင်းပြပေးပါရန်